I-Laurent Koscielny Ibali leNkwenkwe yabantwana no-Untold Biography Facts
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseFrance I-Laurent Koscielny Ibali leNkwenkwe yabantwana no-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba epheleleyo yeGenius ekhuselayo eyaziwayo ngegama; "Bosscielny". Ibali lethu leLaurent Koscielny yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch inyaniso (engaziwa) ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi ngeendlela zakhe ezikhuselekileyo zokuzikhusela kodwa abambalwa bacinga i-Biography kaLaurent Koscielny enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
ULaurent Koscielny Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
ULaurent Koscielny wazalwa ngomhla we-10th kaSeptemba 1985 eTulle, idolophu yesithathu enkulu kunazo zonke kwingingqi yaseLoumin yaseFransi kwaye indawo engafanele yokudlala ibhola yebhola, ngokubhekiselele kwiindawo zokulwa nabemi bayo. ULaurent Koscielny wazalelwa kuMnu noMnumzana uBernard Koscielny, kunye kunye nendodana yabo banamazwe asePoland.
ULaurent wakhulela kwintsapho yezombiwa eTulle, idolophu ephakathi kweFransi, indawo apho ukungabi nantoni kuphelela xa kukho ibhola lebhola ezinyaweni. Ibali lakhe lobuntwaneni linomdla, ukuba akunjalo - okoku inkwenkwe encinci ephethe ingca yobuncwane ibali oye waba kelela nge talente engavamile. Laurent Ngethuba lobuntwaneni bakhe wayezimisele ukuzimisela amaphupha akhe. Iinjongo zakhe zazingekho nje ukugqithisa. Uhlobo lukaLaurent lwebhola leza, ngenxa yomzalwana wakhe omdala owabopha kodwa akazange akwenze kulo mdlalo.
Ngamazwi akhe ..."Iingcamango zokudlala njengomdlali webhola lomdlali webhola nje kuphela yiphupha, uhlobo oluthile lokumangalisa ngamnye umntwana oneminyaka yam engayethemba. Ngelo xesha, into kuphela ebendicinga ngayo yayikudlala ibhola yebhola, ukudlala nokudlala kwakhona. Ndonwabile, ndihlala nabahlobo bam kwaye ndiba nexesha elihle kunye nabo. Ukudlala ibhola yinto yonke endikukhathazayo ngayo, njengabantwana abaninzi bam ubudala.
ULaurent Koscielny Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Umsebenzi kwiSishwankathelo
U-Laurent waqala umsebenzi wakhe kwi-2004 noGuingamp, iqela eliye lavelisa ezo talente UDidier Drogba kwaye Florent Malouda. Waqala umsebenzi wakhe wobugcisa njengelungelo lokubuyela emva kwaye kwathatha iminyaka emithathu kuphela ngaphambi kokuba abe ngumkhosi wokubala. U-Laurent wasebenzisa umsebenzi omningi, ukuzincama, kunye nobugorha obangela ukuba aphakanyiswe kwiqela eliphezulu laseGuingamp apho ajika khona. Ngokukhawuleza ukuba uLaurent wayeneminyaka eyi-18 ubudala, waqala ukugcina imali yokuzinzela yena kunye nosapho lwam. Kamva wabuyela kwiqela leFrench League njengoko wayedlala kwiTours kunye neLorient, encedisa kamva ukufumana ukuphakanyiswa kwiFrentshi yebhola yebhola yebhola.
Kwakungumdlalo kaLaurent okhuselekileyo owakhupha uArsenal oqinisekisile ukusayina kwakhe kwi-7 Julayi 2010. Ibhodi yeArsenal yitywine le ngxelo kodwa u-Arsene Wenger akakwazanga ukunika imvume yokugqibela ngenxa yokuba wayeseMzantsi Afrika kwaye wayishiya ifowuni yakhe ephathekayo ekhaya. Kwakuyixesha uKoscielny elibangela ukuba inyuse njengamaphephandaba aseFransi athi uyaqhubeka nokuqeqesha nabalingani bakhe baseArsenal ngaphandle kokumemezela kwakhe ukudluliselwa kunye nokugqitywa nguWenger. Kamva wagqitywa waza wanikezwa iqela le-club ye-6 shirt, eyayigqunywe nguFilipi Senderos, owayefudukela eFulham.
ULaurent Koscielny Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Kukho ilizwi lokuba yonke into emhle yomsebenzi idinga umntu ofanelekileyo kwindawo efanelekileyo kwaye ngexesha elifanelekileyo. Ngokuqinisekileyo, umntu ono-Laurent Koscielny unobomi obunzima obuncediswa ngumhle kwaye intombi kaKlaire Beaudouin.
Bobabini abathandekayo batshata ngomnyaka we-2015 kunye nenani labadlali be-Arsenal kunye neFrentshi ababekhona.
Nangona umshicileli waseFransi wawubonakala unomdla kuzo Raphael Varane umtshato okwenzeka ngomhla omnye. U-Koscielny akazange avumele umshicileli waseFransi ukuba athathe imifanekiso yomtshato wakhe. Singacinga nje ukuba i-Koscielny icebo lokuthengisa imifanekiso yabo njengenye yezinto ezimbalwa ezithunyelwa kwi-inthanethi zivela kumfazi waseLacine waseBacary Sagna.
ULaurent noClaire banabantwana abathandekayo ababini ngamagama; UMaina noNowa Koscielny bafaniswe ngezantsi kunye noyise. "Abantwana bam bandincede ndiqhubeke phambili ebomini". uthi, uLaurent.
Emva kweeseshoni zokuqeqesha, uLaurent uthanda ukuhamba nabantwana bakhe esikolweni aze alandele kude kube sekupheleni kwemini xa umfazi wakhe ebuya emsebenzini.
ULaurent Koscielny Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ulwazi lweentsapho
Ukuqala kunye nosapho lwakhe, umkhulu kaKoscielny wayenguPolish. Wathuthela eNyakatho yeFransi ukuba asebenze njengommbizi wasePoland. Ngelishwa, ekuhambeni kwexesha yena kunye namanye amalungu entsapho yakhe alahlekelwa ulwimi lwesiPolish kunye neengcambu.
Uyise kaLaurent wadlala kwiqonga lesine lebhola leFransi kumaqela amaninzi ngaphambi kokuba abe ngumphathi. U-Koscielny uye wathetha uyise, uBernard ngokumgcina phantsi emhlabeni aze amncede ahlale ekhumbula ukuba uvelaphi kwaye kufuneka ahlale enyanisekileyo kwiingcambu zakhe. Uyise wayenempahla enkulu kuye Omnye owaqonda kakuhle ihlabathi lebhola. Njengoko uKoscielny ebeka, ..."Wayazi oko kwenzekayo ukuba andizange ndigcine iinyawo zam. Ngethamsanqa, wayehlala enamehlo kwaye wayehlala ekhona ukuze ndicebise malunga nokukhetha ndifuna ukwenza. Ndicinga ukuba ndiyintlekele kakhulu. Ndafumana imfundo enhle kakhulu, kubini kubazali bam kunye nabantakwabo. Bonke ba ndifundise iimpawu ezibalulekileyo. Kwaye namhlanje, yithuba lam lokudlulisela abo kubantwana bam. "
Unina kaLaurent Koscielny uye wahlala ekhokelela ukuba anike inkxaso ngonina. Kwaye nanamhlanje, ukhona kakhulu ebomini bakhe. Njengoko ebeka: "Nguye kwaye wayesoloko ebengumntu obalulekileyo kumsebenzi wam kunye nobomi: ingelosi engumgcini". Unomzalwana onobhola oneminyaka engama-10 emdala kunye kwaye wada wadlala kwiilwimi zamatekisi.
ULaurent Koscielny Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ubomi bomntu
ULaurent Koscielny unalolu hlobo lulandelayo ngobuntu bakhe.
Amandla eLaurent: Uthembekile (zombini iqela kunye nomfazi), ugcinwe, uhlalutyo, usebenza nzima kwaye uyasebenza.
Ubuthathaka bukaLaurent: Iintloni, unokukhathazeka ngezinto, uzigxeka ngokuzimela kunye nabanye kwaye ngumsebenzi wonke kwaye akukho mntu odlala.
Yintoni uLandrent ayithandayo: Uthanda izilwanyana, ukutya okunempilo, iincwadi, uhlobo kunye nokuhlambuluka ngokubanzi.
Yintoni uLisrent ayithandiyo: Ukunyuka, ukucela uncedo kunye nokuthatha ibakala eliphambili.
U-Laurent ngumntu ohlala ebeka ingqalelo kwiinkcukacha ezincinci kunye nolwazi olujulileyo lomntu kumenza abe ngumntu oqapheleyo kakhulu oya kukwazi. Indlela yakhe yokuphila ebomini iqinisekisa ukuba akukho nto ishiywe ngethuba. U-Laurent ngumntu onokungaqondwa kakuhle, kungekhona ngenxa yokuba akanakho ukubonisa, kodwa ngenxa yokuba akayi kwamkela iimvakalelo zakhe ezinyanisekileyo, ezinyanisekileyo, okanye ezifanelekileyo xa echasene nesizathu.
ULaurent Koscielny Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -Ubuhlobo
Ukuqala kwe-Arsenal career yakhe kwakungekho lula. Nangona kunjalo, akuzange kuthathe ixesha elide Arsene Wenger wathandana nobuqili bakhe obubonakalayo kwaye ukususela ngoko, uLaurent uye wazijwayela kumphathi oyingqungquthela.
ULaurent Koscielny Ibali leNkwenkwe yabantwana I-Untold Biography Facts -I-Q & A Iseshoni
U-Laurent uphendule imibuzo ethile ye-QA ekufanele ukwazi ngayo. Ezi zilandelayo ngezantsi zimibuzo kunye nezimpendulo zakhe.
Ngubani Ngaba ngumdlali onzima kunazo zonke oye wabhekana nayo kumdlalo?
Kuphi / apho Umdlalo onokufumana ukubuyela kwakho okukhulu?
Ukugqibela kweYuro eFransi. Kwakuyinto enzima kuthi. Kungenxa yokuba yayisiganeko elowo wonke umntu wayekulindele eFransi. Ndicinga ukuba yonke into yayiyimpumelelo, kodwa ukuphela kokutshatyalaliswa kwakubuhlungu kakhulu. Kuhlala kunomvakalelo onobuhlungu wokugqiba i-adventure njengaye ngale ndlela.
Nini Uzimisele ukuphuma entsimini, ucinga ntoni?
Xa ndiphuma kwintsimi, andicinga into eninzi ngayo, emva kokuba senziwe ngeemikhosi zokubamba ngesandla, ndizama ukugxininisa kumdlalo wam kwaye kuphela kumdlalo wam, ukuze ndikhumbuze izinto endizozenzayo ngexesha lo mdlalo, ndizama ukunika ikona elona lifanelekileyo, ukuba ndibe nomphumo ongcono.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda iLatrent Koscielny Childhood Indaba kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
I-Wissam Ben Yedder Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
UMoussa Sissoko Ibali leBantwana kunye neNgxelo engeyiyo yeBafana
Ibali lase-Aymeric Laporte yabantwana Abantwana abangabonakaliyo
ULacas Hernandez Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts